Mogadishu Journal » 2021 » April » 24
//April 24, 2021
Florentino Perez ayaa sheegay in kooxihii sheegtay todobaadkan inay ka tageen European Super League ay weli qandaraas ku xiran yihiin mashruucan. Madaxweynaha Real Madrid, oo ahaa nin dhaqaajiya isla markaana si adag u ilaaliya kala tagga muranka dhaliyay, ayaa sheegay in kuwa...
Attacks come as tensions in occupied East Jerusalem soar with armed Israeli police scuffling with Palestinians for a second night. 24 Apr 2021 The Israeli military has carried out strikes targeting Hamas positions in the besieged Gaza Strip as evening clashes between Israeli...
Weerar Khasaaro geestay oo loo adeegsaday Toorey oo ka dhacay magaalada Paris
Magaalada Paris ee caasimada dalka Faransiiska waxaa ka dhacay weerar loo adeegsaday toorey oo lagu dilay haweeney katirsaneyd ciidanka booliiska Faransiiska, waxaana weerarkan lagu sheegay mid argagaxiso. Nin asal ahaan kasoo jeeda dalka Tunuusiya darawalna ka ahaa gaari alaabta...
Faah Faahin buuxda oo laga bixiyay Sida uu u dhacay dilka Gudoomiyihii Degmada Hodan
Muqdisho:-Maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta bilowday dhageysiga kiiska dilka Gudoomiyihii degmada Hodan Cabdikariin Dhegajuun oo horaantii sanadkan magaalada Muqdisho ku dileen ciidamo katirsan booliiska Soomaaliya. Taliyaha Saldhiga Booliska Degmada...
Dowlada Somalia oo kahor timid in AMISOM la socoto Dhaq dhaaqa ciidanka Dowlada
Xukuumada federaalka Soomaaliya ayaa si adag uga hor timid go’aankii dhawaan kasoo baxay Golaha amniga & nabadgalyada Midowga Afrika oo ciidamada AMISOM faray in ay la socdaan dhaq dhaqaaqa ciidamada dowlada xiligan kala guurka ah. Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Gaashaandhigga...
Dowlada Turkiga oo baadi goobeysa nin la baxsaday lacag gaareysa 2 Bilyan Dollar
Dowlada Turkiga yaaa baadi goob xoogan ugu jirta soo qabashada nin lagu eedeeyay in lacag gaareysa 2 Bilyan oo dollar kala baxsaday dad badan oo maalgashi ku sameeyay shirkad uu leeyahay. Warbaahinta dowlada Turkiga ayaa shaacisay in Faruk Fatih Ozer, oo ah aas aasaha ...